Ukuhlaziywa kweNgcebiso - Isicwangciso seSt
Iziphakamiso kuyinselele kuba phantse bonke abafundi. Kukho izizathu ezininzi zezi zinto, kungekhona ubuncinane bokuba iNgesi ineentsenzi ezininzi zokubhala . Kule meko, akukho nto enokuyenza ngaphandle kokukhuthaza ukuhambelana nokukwazi ukuphulaphula ngokunyanisekileyo iimpazamo ezenziwe . Kukho nawuphi na, kukho imisebenzi embalwa ootitshala abanokuyenza ukuze bancede abafundi bafunde ulwahlulo oluyisiseko.
Injongo : Ukuphuhlisa ukuqaphela ukusetyenziswa okufanayo okufanayo ngokubhekiselele kumsebenzi obhaliweyo, ukuhlaziywa kweziphakamiso
Umsebenzi : Ingxoxo yesilungiselelo esifanayo esilandelwe ngumsebenzi obhaliweyo
Umgangatho : phakathi
Thatha izinto ezimbalwa kwiklasi, njenge-car model, i-apple, njl. Sebenzisa izivakalisi ezilula ukukunceda eklasini ukuqonda umahluko phakathi / ngaphakathi, ngaphandle / ngaphandle, njl usebenzisa iziphakamiso.
Nika abafundi ezinye zezinto kwaye zikhuthaze ukuba zize zivakalise izivakalisi zabo, ngokukodwa zijolise kwiimeko ezahlukileyo phakathi kweziphakamiso ezixoxwe ngazo.
Xoxa ngezinye zezinto ezisisiseko usebenzisa uluhlu lokuhlola uluhlu olungezantsi. Buza abafundi ukuba bafike ngezinye izinto ezifana 'ekuseni, emini nasemini' kodwa 'ebusuku'.
Dlulisa umrhumo kwaye ucele abafundi ukuba babe ngamabini ukuze basebenze ngokufutshane.
Phatha iphepha lokusebenzela njengeklasi uze uxoxe ngeengxaki okanye imibuzo.
Phinda nomsebenzi wokuqala ukukunceda ukuqinisa ukufunda.
Uluhlu loHlolo lokuHlola
Sebenzisa 'ukuya' ngeentsenzi zokuhamba . Wahamba waya esitolo.Yahamba waya epakini.
Sebenzisa 'nge' kunye neendawo ngaphakathi kwesixeko esinamazwi angahambisani nokunyakaza. Ndiza kuhlangana nawe kwivenkile yezitolo.Indithanda ukuphumla ekhaya ngeveki.
Se benzisa 'kwi' kunye neendawo, zombini eziqingqiweyo kunye ezizodwa. Lo mfanekiso omhle eludongeni. / Ndiyathanda i-vase etafileni.
Sebenzisa 'ukungena', 'ngaphandle' kunye 'nokuya' ukubonisa intshukumo ukusuka kwenye indawo ukuya kwenye. Waphuma ngaphandle kwegaraji./Sicela ubeke izitshixo kwitafile.
Sebenzisa 'kwi' ngeenyanga, iminyaka, imizi, amazwe kunye namazwe. Uhlala eSan Diego. / Ndiza kukubona ngo-Ephreli.
Sebenzisa 'nge' ngamaxesha emini. Masibonane ngehora lesithathu. / Ndifuna ukuqala intlanganiso ezimbini.
Isandi esinqabileyo ebusuku ...
Kwakuhlwa ebusuku (nge / /) ebusuku xa ndive ingxolo. Ndine (ngaphandle / ngaphandle) ndize ndagqiba ukuphanda. Okokuqala, ndaya (ngaphakathi / kwi) igumbi lokuhlala nekhitshi. Yonke into ibonakala ilungile kulamagumbi. Emva koko ndava ingxolo (kwakhona / ngaphezulu). Kwakuvela (ngaphandle / ngaphandle), ngoko ndibeka (nge / off) ibhatyi lam, wavula umnyango waza wangena (ngaphandle / ngaphandle) ngasemva. Ngelishwa, ndandilibalekile (thabatha / nge) i-flashlight endleleni yam (ngaphakathi / ngaphandle) umnyango. Kwakubu busuku obumnyama kwaye kwakukho imvula emvula ewa. Andizange ndibone okuninzi, ngoko ndaqhubeka ndihamba (ngaphakathi / ngena) izinto kwididi. Isandi saqhubeka saphinda kwaye saza (phezu / ukusuka) kwindawo (kwi / /) nakwelinye icala (ukuya / kwendlu). Ndanduluka kancane (ngaphaya / ngeenxa zonke) indlu ukuba ndibone oko kwakwenza ingxolo. Kwakukho itafile encinci (kwi / /) kwiplanga elaliyi (elandelayo / kufuphi) eludongeni. (Ku / / ukuya) phezulu kule tafile kwakukho isitya kunye namanye amatye (ngaphakathi / ngaphakathi). Imouse emancinci yayizama ukufumana (ngaphandle / ngaphezulu) kwaye yayihambisa izitye (ngeenxa zonke / ngokudlula) isitya esenza isandi.
Kwakuyinto engaqhelekanga, kodwa ngoku ndingabuyela (kwi / ukuya) ukulala!
Indlela Yokufundisa Iimpawu
Ukufundisa izakhono zoQhagamshelwano - iingcebiso kunye neendlela
Indlela yokusebenzisa iiNgcaciso kwiKlasi
Indlela yokufundisa isiNgesi ukuya kweyodwa ngempumelelo
Yenza iMask Gras Gras - Iprojekthi yesiFrentshi
Indlela yokusebenzisa i-Google Translate ukufundisa isiNgesi
Indlela yokufundisa imiqathango
Ukubhala i-English Drama Scripts kwi-ESL Class
Izifundo zengxabano kwiSigaba se-ESL
Amasebe kaMbuso weeMerika ezingama-50
Ukusebenzisa isenzi 'Venir'
Abantu AbaMbala kwiCinema NgeeLungelo LoLuntu, amaRomance namaHholide
Imifanekiso yabasetyhini abaselula kwi "Ixesha lezingane"
Izizathu ezilishumi eziphezulu zokuba nguMthengisi weCasino
Umthendeleko weNtetho yeNkosi
Ngamaxesha amaninzi kufuneka uMculi weMculi asebenze?
10 Uninzi lweMararo eKrisimesi
Yintoni Inkxwaleko kwiBhola leGalfu?